Wed, Sep 30, 2020 | 02:38:21 NST
भिसा प्रमाणीकरणको लागि के-के काजगातहरु पेश गर्नु पर्दछ?
प्रश्नः हाल म बैदेशिक रोजगारको लागि ९ बर्ष देखि कतारको दोहामा कार्यरत छु। मेरो पेशाको हिसाबले पाउने तलबमा एकदम सन्तुष्ट छु । सबै सुबिधाहरु एकदम राम्रो छ। अहिले कतारको प्रोजेक्ट सकियो र यहाँबाट कम्पनीले युएईको अबुधाबीमा ट्रान्सफर गर्दिएको छ। तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन गाह्रो छ रे। १) युएईमा कम्पनीले के-के कागजातहरु पेश गर्नु पर्छ मेरो भिसा ईन्डोर्स्मेन्टको लागि? २) नेपाल स्थित श्रम विभागमा मैले के-के काजगातहरु पेश गर्नु पर्दछ? उत्तरः कृष्ण दुवाडी, प्रमुख, श्रम ग्राम, वैदेशिक रोजगार विभाग ...
प्रश्नः मेरो उमेर ३५ बर्ष भयो। म अर्को बर्ष इन्डियन आर्मिबाट अवकाश प्राप्त गर्दैछु। मैले १२ पास गरेको छु। मेरो उचाइ ५ फिट १२ इन्च छ। मलाई ब्रुनाइ शेक्युरिटी गार्डमा या प्रहरीमा जान मन छ। त्यसको लागि के के योग्यता चाहिन्छ? म जान पाउछु कि पाउदिन ? उत्तर: कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ – ब्रुनाइ सरकारको शेक्युरिटी गार्डमा ब्रिटिस गोर्खा आर्मि मात्र जान पाउने नियम छ। ब्रुनाइमा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउँने ब्यबस्था छैन। ब्रुनाइमा रहेका आफन्तहरुले नै नेपालबाट आ...
प्रश्न: मेरो देब्रे हातको चार वटा औंला छैन । म २/३ वर्ष बैंगलोर, इण्डियामा ग्राफिक डिजाइनरको काम गरेर फर्केको हुँ । ६/७ वर्ष देखि नेपालमा पनि यही काम गरिरहेको छु । मैले दुवै हातले मज्जाले कम्प्युटर चलाउन सक्छु । अब म कतार, युएईजस्ता खाडीका देशहरुमा ग्राफिक डिजाइनरकै काम गर्न जान पाउँछु कि पाउँदिन् ? उत्तर: कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - मज्जाले जान सक्नु हुन्छ। पत्रपत्रिकामा बिज्ञापन हेरेर सायद भ्याउनुहुन्न होला। यो महंगो पनि पर्न आउछ। सब भन्...
प्रश्नः म २१ वर्षको भएँ । प्लस टु पास गरेको छु । म सेक्युरिटी गार्डमा विदेश जान चाहन्छु । तर सेक्युरिटीबारे केही जानकारी छैन् । म जान सक्छु कि सक्दिन ? उत्तरः बलबहादुर तामाङ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - सेक्युरिटी गार्डमा जानको लागि पहिलो कुरा सेक्युरीटी गार्डको तालीम लिएको हुनु पर्‍यो। काम जानेको हुनु पर्‍यो। अंग्रेजी भाषा आउनु पर्‍यो। किनभने उता पिएसबिडी लिखित परिक्षा लिन्छ, काम गर्नको लागि परिक्षा पास गर्नै गर्छ। युएई सरकारले २,७५० दिहराम वेसिक तलब दिएको छ,...
शरीरमा सेतो दुवी हुनेले वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइन्छ ?
प्रश्न: मेरो शरीरमा सेतो दुवी छ । अब मैले रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँछु कि पाउँदिन ? उत्तर: सुरेश पौडेल, केन्द्रीय प्रतिनिधी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ -सामान्य रुपमा सेतो दुबि भएकोलाई विदेशमा स्वास्थ परिक्षणमा अयोग्य भनेर फर्काएको उदाहरण छैन। तर धेरै नै छ। तपाईंलाई असर नै गर्ने खालको। बाहिरबाट हेर्दा नै प्रस्ट देखिने खालको छ भने नजादानै राम्रो हुन्छ।
युएई पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डमा जान के के चाहिएला ?
प्रश्न: म युएई पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डमा जान चाहन्छु। मसँग सेक्युरिटीको अनुभव पनि छ। तीन वर्ष विदेशमा काम गरिसकेको छु। तर मसँग एक्पिरियन्स सर्टिफिकेट छैन्। एसएलसीको सर्टिफिकेट मात्रै छ। पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डमा जानका लागि के के कागजात चाहिएला ? उत्तर: बलबहादुर तामाङ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डमा जानको लागि पहिलो कुरा सेक्युरीटी गार्डको तालीम लिएको हुनु। काम जानेको हुनु पर्‍यो। युएई सरकारले २,७५० दिहराम वेसिक तलब दिएको छ, तलबको लोभमा धेर...
जण्डिस भएकाले विदेश जान पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
प्रश्न: युएई जानका लागि मेरो भिसा लागेको थियो । तर जण्डिस भएकाले जान सकिन । अब मैले विदेश जान पाउँछु कि पाउँदिन् ? उत्तर: सुरेश पौडेल, केन्द्रीय प्रतिनिधी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ - आकाश जी, तपाईंको जण्डिस औषधिको प्रयोगले निको भइसकेको भए तपाईंले जाने प्रक्रिया अघि बडाउदा हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
प्रश्न: वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? सूचना परामर्श कहाँ पाइन्छ ? कुवेत जानको लागि कति शिक्षा लिएको हुनु पर्छ। भाषा सिप सिक्न कहाँ सम्पर्क गर्ने बताइदिनु होला। उत्तर: युनिसा जी, वैदेशिक रोजगारमा जांदा कुन देश र काममा जाने, सोको लागि कति खर्च लाग्छ, काम गरेवापत तलव, खाना र बस्ने व्यवस्था, काम गर्नु पर्ने घण्टा, ओभरटाइम काम भत्ता, करार अवधि आदि बारेमा राम्ररी जानकारी लिनुहोस्। दोहोरो सम्झौतापत्रमा सही नगर्नुहोस, ठगिनु हुन्छ। उदयपुरमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय...
विदेशमा पासपोर्ट हराए कसरी लिन सकिन्छ ?
प्रश्न : विदेशमा रोजगारीको दौरान कुनै समयमा हाम्रो पासपोर्ट हराए दूतावासबाट कसरी पासपोर्ट लिन सकिन्छ ? अनि कति दस्तुर तिर्नु पर्छ ? उत्तर : विदेशमा पासपोर्ट हराए आफू कार्यरत कम्पनीले हराएको कारण सहित पासपोर्ट नम्बर राखेर स्थानीय प्रहरी कार्यलयमा रिपोर्ट गर्नु पर्छ। साथै भिसा लगाईदिने सोहि देशको अध्यागमन विभागमा पनि रिपोर्ट गर्नु पर्छ। र त्यसको प्रतिलिपी ,प्रहरिमा गरेको रिपोर्टको प्रतिलिपी, पुरानो पासपोर्टको प्रतिलिपी कम्पनीको आधिकारिक पत्र, सक्कली नागरिकता लिएर दूतावास गई दोब्बर दस्तुर तिरेर प...
म्यानपावरले पुरानो माग भन्दै धेरै पैसा लिए कहाँ गएर उजुरी गर्ने ?
प्रश्न: सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु गरेको भएपनि म्यानपावरले पुरानो माग भन्दै धेरै पैसा लिन्छ। यस्तो समस्या हुँदा हामीले कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? यस्तो म्यानपावरलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ? अहिले मैले यस्तै समस्या भोगिरहेको छु। मैले सिनामंगलस्थित ग्लोबल ओभरसिजलाई ८० हजार रुपैयाँ तिरी मलेसियामा सेक्युरिटीमा काम गर्दै छु। यहाँ आएपछि मात्र थाहा भयो फ्रि भिसा फ्रि टिकट रैछ। उत्तर: मातृका जी, ८० हजार तिरेको प्रमाणका रुपमा रसिद अथवा म्यानपावरलाई रकम ट्रान्फर गरेको कुनै प्रमाण भए तपाईंको आफन्तले ...